Nwere ike ịme mmanya nke gị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ihe ọ drinkụ sportsụ egwuregwu a na-eme n'ụlọ - chọọ ngwọta
Ihe ọ drinkụ sportsụ egwuregwu a na-eme n'ụlọ - chọọ ngwọta
Nwere ike ịme mmanya nke gị?
Na ite nwere okpukpu abụọ, jikọta mmiri aki oyibo na ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi. Nwuo na mmanụ a honeyụ na nnu mmiri ruo mgbe agbaze ya kpamkpam. Ghaa na mmiri ma tinye lemon ma ọ bụ ihe ọimeụ juiceụ lime, nụrụ ụtọ, ma ọ bụrụ na achọrọ. Na-arụ ọrụ oyi.Ọgọst 25, 2016
Jarod Nielsen si Nielsen Clinic ebe a na Heber City Utah Achọrọ m ikwu maka ajụjụ nkịtị m na-enweta ọkachasị mgbe anyị na-ekwu maka ụmụ akwụkwọ-ndị egwuregwu iji meziwanye arụmọrụ m yana ihe m na-akwado bụ hydration yana otu Echiche anyị ji azụ ehi. mgbe mụ na otu anụmanụ na-arụkọ ọrụ, mgbe mụ na ehi na-arụkọ ọrụ mgbe niile na-anwa ịmịpụta akwara karịa paụnd nke nri ejiri ihe kacha mkpa dị mkpa ha nwere ike maka ịchụ àjà ahụ ike nke nnu, ịtọcha nnu na yabụ anyị wee bia na bionativistic branded electrolyte drop maka ndị mmadụ, nke bụ isi ihe sitere na Great Salt Lake nke na-enye naanị electrolytes na mineral dị mkpa iji wulite ahụ ike mgbe ị na-ewere ọtụtụ ihe ọ sportsụ sportsụ egwuregwu ahụ. Naanị ihe dị mfe iji gị ọzọ shuga ihe na-eme ka agba agba dị ụtọ, mgbe ahụ, nnu nwere ihe mgbakwunye zuru oke nke electrolytes dị mkpa na ihe ndị na-achọpụta na ọ bụ naanị dị na ya mmiri mmiri. Emere ụfọdụ ọmụmụ iji nwalee ụdị mmiri dị iche iche gburugburu ụwa na ihe ha hụrụ bụ Osimiri Nnu Salt ebe a na Utah nwere ebe kachasị dị elu nke ihe nchọta na nke ahụ bụ ihe Bio Tevas ji mee ihe mgbe ọ na-elele anya otu a. na ngwaahịa.
Ọ na-abịa nha abụọ na karama 2 oz nke buru ibu na-eme ka onye na-eme egwuregwu site na ọnwa 3 ruo ọnwa anọ dabere na oge ole a na-ejigharị ha. Ihe ozo anyi choputara bu na anyi na eme ya karia otutu ego iji protein, ihe owuwu maka protein ndi a na-akpọ amino acids, na ihe ndi ozo nke biotics bu amino acid ngwa ngwa ma o na aru oru nke oma iji nwetaghachi ike ike ma gbakee ngwa ngwa. mgbe m na-agba ọsọ, Ski na Gohard dị ka m nwere ike gbadata ugwu ahụ ebe ahụ, ebe m meworo ọtụtụ ọsọ na ahịrị, quads m na-amalite ịgba ọkụ ma ọ dị m ka ọ nwere ike ịnweta obere mgbochi dị ka m Ana m agbali ime nke ahụ n'ime m Nọgidenụ na-eji ogologo ọkpa mgbe m na-arịgogo, m ga-ewere mkpuchi ahụ ma were obere nracha ma ọ bụ squirt ma jigide obere oge ọnụ m wee ilo ya mgbe m 'm n'elu igwe mbuli, quadburns m apụla ma enwere m ike ịgba ọsọ n'ugwu maka onye ọ bụla na-enwe mmasị ịzụ ọzụzụ siri ike mana ọ ga-aga vo2 max ngwa ngwa ma ghara ịpịa ọzọ, Ọ bụrụ na ị jiri ngwaahịa a, dị nnọọ ịgba na-enyere aka na ngwangwa mgbake uru ọzọ, n'ihi na ebe a, ọ bụ amino acid n'ụdị ha dị ọcha. Amino acid nwekwara ike inye aka na mbido ma ọ bụ mgbochi ụlọ nke ndị na-ahụ maka ntanetị na nke a bụ ngwaahịa nke m na-ejikarị eme ihe maka ụmụ m ndị nwere autism, ụmụaka nwere nkwarụ na-adịghị ahụkebe, ụmụaka nwere nchekwa DD ma ọ bụ na-adịghị elezi anya, nke na-enyere aka zụọ ahụ. ụbụrụ na ụzọ anyị si ekwu okwu banyere irighiri akwara Developmental retardation bụkwa nri dị mkpa mgbe anyị na-ele ndị mmadụ anya, bụ ndị nwetagoro trauma ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ mgbe ihe mberede ma ọ bụ mkparịta ụka ng ihe anyị nwekwara ike iji ka m wee gosi gị ọsọ ọsọ ịme gị egwuregwu ọ drinkụ drinkụ n'ụlọ.
Were karama mmiri, wepụ ihe mkpuchi ahụ, wee tinye otu dobe maka kilogram isii nke ịdị arọ ahụ, nke ahụ bụ otu dobe nke bionativistic electrolyte tụlee maka kilogram isii nke ahụ. Ya mere ọ bụrụ na ị dịrị otu narị na iri asatọ pound ị na-aga iji ihe dị ka iri atọ tụlee ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ rụọ ọrụ ya na-amasị m ịkwanye ya ntakịrị wee banye ndị a tụlee gụọ maka ahụ gị ibu mgbe ahụ na-amino acid Quickzorb na ọzọ a yiri dobe ebe actually na-eji otu dobe maka kilogram isii nke ibu ahụ, ọzọ 30 tụbara na karama mmiri gị maka ekpomeekpo na ọzọ maka mmeghachi omume shuga ngwa ngwa, otu na abụọ na ruo tablespoons anọ nke ihe ọ juiceụzenụ oyi kpọnwụrụ akpọnwụ na karama mmiri mgbe ahụ ịma jijiji na ị na-na na na na na gị onwe gị Sports ọ drinkụ createdụ kere na nwere nguzozi ruru nke electrolyte-ewu amino asịd gị protein na mgbe a bit shuga maka mgbake ngwa ngwa na m na-a drinkụ otu n'ime ha tupu gị arụmọrụ na otu ọzọ mgbe arụmọrụ ahụ gasịrị. Ga-eju anya otu ị ga - esi gbakee ngwa ngwa yana otu ị si gbakeghachi akwara na-eche na enwetaghachila ma dị njikere ịrụ ọzọ. Enwere m olile anya na nke a bụ ihe enyemaka nye ụmụ ha, ọkachasị maka ndị nne nke ndị na-egwu egwuregwu, otu n'ime ihe kachasị mma ị nwere ike ịnye Ihe ọ drinkụemụ egwuregwu gị a na-eme n'ụlọ dị mma karịa ihe ọ bụla nke enweghị agba niile, shuga na ndị na-agba agba N'ezie na-enye ha ihe ga-edebe ha ma nyere ha aka ịgbake ngwa ngwa, ekele maka ikiri
Kedu ihe m ga-a drinkụ kama Gatorade?
8 AhụikeMmanyaỌgaranya na Electrolytes
Aki oyibo. Mmiri oyibo, ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ aki oyibo, bụ mmiri doro anya dị n'ime aki oyibo.
Anyụ mmiri (na mmiri mkpụrụ osisi ndị ọzọ)
Ezigbo ire ụtọ
Egwuregwuụọ ihe ọ .ụ .ụ.
Ọnwa Atọ 30, 2019
Hey ụmụ okorobịa, taa anyị ga-ekwu maka ọdịiche dị n'etiti Powerade na Gatorade. You gara n’otu ụlọ ahịa ahụ, ị ​​ga-ahụ nnukwu wara wara nke jupụtara n’ihe abụọ a ka ahịa ha siri sie ezigbo ike, amaghim ma ọ bụrụ na ị? maara nke ahụ mana Powerade nwere Coca-Cola Gatorade nwere Pepsi Cola na n'ụzọ ahụ, Coca-Cola nweziri Powerade Minute Maid Ehrlich, onye ọzọ aha ya bụ Odwalla Juice Amaghị m etu m ga-esi kpọọ ezigbo mmiri oroma mmiri Sprite ị zụtara site na ụzọ maka ijeri $ 4.1, nke nwere gram 31 nke shuga, teaspoons 6 yana mmiri aki oyibo Zico, yabụ kedu isi ihe dị iche? Eleghị m anya na syrup ọka fructose dị elu ka njọ, mana eziokwu ahụ na ha anaghị agwa gị ebe sucrose na-abịa apụtaghị na okpete nwere ike ịbịa, ọ ga-abụkwa na ọ bụ site na beet beet na GMOs bụ Ọ dị mma nke pụtara na ọ nwere resides nke glyphosate, ọ bụghị ịkọ na m nụrụ ọka sirop nke a na-eme site na ọka ma nweekwa ihe fọdụrụ nke glyphosate, ugbu a sucrose bụ 50% glucose na 50% akwa fructose fructose sirop syrup Sucrose bụ Olee ihe enyemaka. 42% fructose na 58% glucose, yabụ sucrose nwere fructose karịa na fructose na - emepụta insulin na - eguzogide insulin karịa glucose n'ihi na ọ na - ebubata imeju na imeju na - echekwa ya na ebe nchekwa yana n'ihi oke shuga a, ahụ na - amalite insulin ịzụlite ha abụọ yiri nnọọ nke ọma, mana ọ nwere ike bụrụ na nsogbu kacha njọ, ọ dị mma ma ọ nwere dextrose nke bụ shuga na-arụpụta shuga na nri nri, na nke a bụ aha ọzọ maka monosodium glutamate, yabụ nke a bụ ekpomeekpo ọ na - eme ọ dị mma karịa na ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị nwere electrolytes ọ dị mma, anyị nwere potassium na sodium naanị anyị nwere abụọ, anyị enweghị ihe niile, ha na-enyekwa gị ihe dị ka milligrams 35 nke potassium na naanị ka ị mara na ahụ anyị chọrọ milligram 4,700 kwa ụbọchị, yabụ nke ahụ bụ akụkụ dị nnọọ obere nke ihe ị chọrọ n'ezie.
Powerade anyị nwere iri atọ na ise na Gatorade nwere sodium iri anọ na ise, anyị nwere otu narị na iri ise milligram ma ebe a anyị nwere otu narị na iri isii milligram nke sodium na Powerade nwere ihe sịntetik b6 b3 b12 na Gatorade enweghị vitamin ndị ọzọ, nke mere na otu onye bụ mma nke bụ n'ezie njọ ha abụọ njọ mere n'ihi nke ego shuga bụ sugar mmiri na a ole na ole obere mineral elu na sodium ya mere ọ bụrụ na ị na-agbalị hydrate onwe gị were ihe niile electrolytes enweghị sugar enweghị zoro ezo zoro ezo na-enweghị malt dextran na ị ga-aka mma ugbu a, Oge ụfọdụ ị ga-anụ na mgbe ị na-emega ahụ, ịkwesịrị iji dochie shuga ị na-ere ọkụ mgbe ọ na-abanye glycogen gị, mana nsogbu bụ, ọ bụrụ na ị bụ dochie glycogen gị, ị ga-akwụsị ike glycogen gị ịdọrọ abụba gị, nke nwere ike bụrụ otu isi kpatara kpatara ị na-anụ Mgbatị ahụ, yabụ na unu abụọ agaghị enyere gị aka ịkwụsị ibu, na cha enwere ike ịbụ na ị ga-enwe obere ume na ikekwe ike gwụrụ n'ihi na ọnụọgụ shuga ị na-agbụpụ bụ insulin shuga na-agbanye shuga, ị nwere obere ọbara shuga ihe dị ka elekere elekere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu data na electrolytes tapawa njikọ n'okpuru, lelee ya na ekele maka ikiri, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, gaa n'ihu ma kesara ya onye ị maara na ọ nwere ike irite uru na ya
Kedu ka esi eme ihe ọ drinkụ energyụ egwuregwu?
Yabụ ịchọrọmee nke giisotonicegwuregwu ọ drinkụ drinkụ- gini kwesiri inwe?
100ml squash / cordial (not 'mbelata shuga' di iche) 400ml mmiri. Njikere nnu.
250ml nke ezigbo ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi (100% ihe ọ juiceụ juiceụ, ọ bụghị 'ihe ọ juiceụ juiceụụọ ihe ọ .ụ .ụ') 250ml mmiri. tuo nnu.
1/2 Wayo ihe ọ juiceụ juiceụ (ihe dị ka 20ml) 150ml Apple juice.
Lemon lemon 44ml. chunk nke raw ginger.
Hey ụmụ okorobịa! Ya mere, na nke mbụ, achọrọ m ikwu na nwute na anaghị m eziga akwụkwọ akụkọ dị ka nke a n'oge na-adịghị anya, abụghị pọdkastị, ihe nzuzo ruo nwa oge. Mana echere m na ọ bụrụ na ị na-ele pọdkastị ma ọ bụ soro m na Instagram m marala ihe nzuzo a bụ. Ọ bụrụ na ị gụọ aha ahụ, ikekwe ị makwaara ihe nzuzo ahụ bụ.
M tọhapụrụ mmanya m! * yay sound effect * Anaghị m a drinkụ mmanya n’aka m. M tọhapụrụ nke m - oh nke ahụ bụ oghe. Ike gi a energyu ihe ike! Ọ dị oke ọkụ - ị nweghị ike ịhụ ya - ndị bekee, emere m ike m drinkụọ! Nke ahụ ọ́ bụghị nzuzu?
Mmiri oyibo ọ ka mma karịa Gatorade?
Ezigbo isi iyi potassium
Aki oyibonwekwara potassium karịakarịaegwuregwu ọ drinksụ drinksụ dị kaGatoradema ọ bụ Powerade. Oru 11,2 ounce nkeaki oyibonwere 690 mg nke potassium, ebe a 12-ounce serving ofGatoradenwere 140 mg nke edozi ahụ.Jun 17, 2014
Lee ihe na-eme Triathlon Traniacs. Triathlon tarer ebe a na isiokwu triathlon gị kwa ụbọchị iji nyere gị aka ịchịkwa mgbatị gị, agbụrụ gị, bụrụ triathlete ka mma ma nwee olileanya inwe ndụ dị mma na njedebe. Taa bụ akụkụ nke atọ nke usoro anyị ka anyị na-eje ije gị site na ịchọpụta na ịkọwapụta usoro nri gị maka agbụrụ triathlon na ihe anyị na-ekwu taa bụ mmiri mmiri.
Ugbu a, anyị ga-agafe nhọrọ hydration ise kachasị dịkarịa ala ị nwere ike iji n'oge agbụrụ, anyị ga-agabiga ha n'usoro nke m chere na ọ ga-abụ nhọrọ kachasị njọ, mana otu na onye kwesiri na-atụle ya iji ha bụrụ nhọrọ kachasị mma n’uche m. N'ụzọ doro anya, mmiri bụ nhọrọ kachasị, ọ na-eche na ọ gaghị ebute nsogbu nri, ọ dị mfe, ọ dị ọnụ ala, ị gaghị echegbu onwe gị maka ịchọta mmiri mgbe ị bịara n'ọsọ. Have nwere ya ebe niile.
Ike ọghọm nke mmiri nwere ike karịa uru karịa, agbanyeghị.Bec Ebe ọ bụ na enweghị carbohydrates na mmiri, ọ na-esiri ahụ anyị ike ịmị mmiri ndị ahụ. Nke abuo, o nweghi electrolytes na mmiri nke di na electrolyte di nkpa n’aru aru anyi ma adighi m ekwu okwu banyere oru ndi n’abia, ana m ekwu maka oru ndi n’anaghi anwu.
Mgbe ịmalitere ị aụ mmiri nke mmiri ma gbaa mmiri nke electrolytes, mmiri a na-akpọ mmiri electrolyte na-akwado mmiri ma kpọọ ya hypernatremia ma ọ dị ka nsị mmiri. Ọ dị njọ dị ka akpịrị ịkpọ nkụ Otú ọ dị, ndị mmadụ nwere ike ịtụle iji naanị mmiri bụ ndị dị ka ndị enyi m nwere afọ na-enweghị mmerụ na enweghị ike ịnwe ụdị ọ electroụ electroụ electrolyte ọ bụla n'ihi na uto ya na-eme ka ha na-asọ oyi n'onwe ya, na nke a ka m kwadoro. ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị egwuregwu a na ị ga-ewere mmiri gị na mbadamba nnu, n'ihi na mgbe ahụ nguzozi nke mmiri na electrolytes na ahụ gị ziri ezi. Nhọrọ nke abuo ma oburu na ichoro ikwenye na ihe eke, inwere ike iji ihe dika mmiri oyibo.
Ọ nwere di na nwunye nke uru. N'ụzọ doro anya, ọ bụ ihe e bu pụta ụwa. Fọdụ ndị mmadụ na-anabata ya nke ọma na n'ihi na ọ bụ ihe okike, ọ dịịrị ụfọdụ ndị mfe ịgbari.
Na aki oyibo, Otú ọ dị, ọ bụ ezigbo uto siri ike, yabụ ị ga-enweta ike ọgwụgwụ uto, ọkachasị n'oge agbụrụ. A na-emepụta ihe ọ drinksụ Electụ Electrolyte site na sayensị nke egosiputara na ọ kacha arụ ọrụ ma nwee ihe ruru sodium-potassium ruru abụọ, mmiri oyibo na-adịkarị ka otu-na-atọ sodium-potassium ruru. Nke a nwere ike ibute nsogbu, nsogbu nsogbu, na ụdị ihe ọjọọ niile ị ga - ejedebe mgbe ị na - eji ite.
Nhọrọ nke atọ, nke dị mma karịa abụọ ndị ọzọ, bụ ihe ọ electroụ electroụ electrolyte dị arọ, ebe calorie gị niile, mmiri mmiri, na electrolytes sitere na ihe ọ electroụ electroụ electrolyte a dị arọ. Nke a bụ ihe dịka Gatorade ntakịrị pro. Number otu, nnweta nnweta.
Nwere ike bulie nri ọsọ gị niile na ụlọ ahịa ọ bụla dị n'ụzọ ị na-agba ọsọ. O yikarịrị ka ị ga-enweta ya n'ọsọ ahụ ma ọ bụrụ na ihe emee ihe na-ezighi ezi na n'ihi na ọ bụ ihe ngwọta niile, ị ga-enweta ya niile. Kwesighi ịrapagide ụyọkọ nke gels na chịngọm na ogwe na igwe kwụ otu ebe.
Achọrọ m iwere ihe dịka nke ahụ maka agbụrụ dị mkpụmkpụ, dị ka ọsọ ọsọ ọsọ, mana ihu ala bụ, ọnụọgụ nke mbụ bụ na ịnweghị ike ịhazigharị ihe ọ bụla; carbohydrates na electrolytes ndị dị n’ebe ahụ. Nọmba abụọ, uto nke ihe ọ drinksụ drinksụ ndị a electrolyte siri ike na-adịkarị ike, yabụ ị ga-enweta ike ọgwụgwụ ọnụ ahụ ma ị chọghị ị anotherụ mmiri ọzọ na njedebe nke agbụrụ. Nke atọ bụ na o siri ike nke na ọ na-etinye nnukwu nrụgide n’ime afọ gị n’otu oge nke na ọ dịghị nnukwu ọbara n’ime ya n’ihi na ọbara na-agbapụta na aka gị na ụkwụ gị, ọ na-amalitekarị ire ere eriri afọ.
You're naghị enwe mmetụta nke ọma na ngwụcha agbụrụ ahụ n'ihi na ọ dịkwa ike na shuga na-arụ ọrụ nke ọma, ihe ọghọm shuga nwere ike ịkarị. Were ihe niile a na-eme n'ime otu ụzọ emere maka agbụrụ niile. Uru ya bara ụba.
N'ọtụtụ oge, a na-ahazi usoro ndị a maka gị ka ị leba anya na ọsụsọ gị, ibu, na atụmatụ iri nri. Uru nke abuo bu na inwere ihe eji emeputa ngwa ngwa n’uche n’ihi na emebere ha n’uzo sayensi n’oge a. Ya mere, ndị a na-abụkarị ezigbo omume enyi.
Nnọọ ọkụ, dị ezigbo ụtọ nwere ike ịmezie profaịlụ uto. Ihe niile dị mma yana maka na ọ bụ nri mmiri mmiri niile, ọ dị mfe ibugharị ruo mgbe ị nwetara ọghọm ya. Maka na a haziri ihe niile maka gị.
Mgbe ihe mejọrọ na nke a bụ isi gị? Isi mmalite nke mmanụ na mmiri mmiri, ị ga-abanye na nsogbu. Ọ bụrụ n ’ị ga - atụda karama mgbe ị ga - achọpụta otu ị ga - esi mejupụta ngwaahịa a na - edozi ahụ n’oge agba ọsọ, ọ nwere ike isiri gị ezigbo ike. N'ihi na a otutu nke ndị a na-omenala mere, pụrụ iche a haziri, na ogologo ụzọ ugboro na ha na-adịkarị oké ọnụ.
Nke ise, na m chere nhọrọ kachasị mma nke ga-arụ ọrụ maka ọtụtụ mmadụ, bụ ị bottleụ electrolytes na mmiri mmiri na ịchekwa calorie maka akpa gị na ebe a bụ ebe ị malitere inwe ihe ọ electroụ electroụ electrolyte. Ọ bụ ihe dị ka Skratch. Nke a bụ ngwaahịa ị nwere ike ịnwe naanị 70 ka calorie 90 n'ime karama, mana ị na-eri ezigbo electrolytes.
Uru dị na ya bụ na ị nwere obere kalori, na calorie ndị ahụ na - enyere gị aka ịmịnye ndị electrolytes mgbe ị na - a itụ ya, mana ọ bụghị na ọtụtụ calorie na - eme ka afọ gị jupụta, yabụ ọtụtụ ndị na - agbarị ala ma ọ dị mma. Ebe ọ bụ na ndị a dị oke ọkụ, ị gaghị akwụsị ịnweta ike gwụrụ uto nke ị nwetara site na ihe siri ike karịa na ekpomeekpo ma na m achọpụta na nke a bụ ihe ngwọta nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eme nke ọma n'ihi na ha dị ezigbo mma. dị mfe ị nweta, n'agbanyeghị ebe ị nọ, ọ dị mfe ịkwakọ ma ha dị mfe igwu. Agbanyeghị, ọdịda ya bụ na ị nwere ya niile.
Ọ bụrụ na ị nweta oke electrolytes na obere carbohydrates iji gbarie ndị electrolytes, mgbe ahụ ịkwesịrị ibu calorie na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ n'akpa uwe gị. Choo uzo ichoro gi nke oma na totriathlontaren.com/triathlonnutritionguide wee nweta ya niile, n’ime ubochi anọ bido n’isi, bido n’onodu gi na ndi ozo banyere otu esi edozie ya maka agburu ndi di n’ihu nsogbu di iche iche ichoro.
Ọ bụrụ na ịnweghị ịdenye aha ma chọọ ijide n'aka na ị gaghị echefu Akụkụ Anọ nke Otu esi esi abanye: Usoro Triathlon Gị Maka Nri Nri, pịa bọtịnụ ịdenye aha n'okpuru wee pịa mgbịrịgba ọkwa ka ị ghara ' t nweta otu akụkọ ọdịnihu dị ka akụkụ na-esote ma hụ ezigbo mkpuchi triathlon, lelee isiokwu nkuku anyị mere ebe ahụ.
Pedialyte dị mma karịa Gatorade?
Pedialytengwaahịa na-enye obere calorie na shuga na ọdịnaya dị elu nke electrolytekarịa Gatorade.Pedialytenwere ike inyere ndị nọ n'afọ ndụ niile aka ịgwọ ọrịa, mgbeGatoradeezubere kpọmkwem maka ndị na-eme egwuregwu okenye.Ọnwa Ise 10, 2021
Kedu ihe Gatorade ji jọgburu gị?
Ihe ize ndụ nke ị drinkingụ mmanyaỌzọkwaukwuuGatorade
Na mgbakwunye na ịgbakwunye electrolytes na mmiri mmiri nke onye ahụ, ọ na-agbakwunye shuga. Dịka, ndị na-eme egwuregwu siri ike na ndị mmadụ na-etinye aka na ogologo oge, ọrụ siri ike nwere ike ijikwa shuga agbakwunye, n'ihi na ha ga-agba ya ọkụ, n'oge ọrụ ha na-eme.
Kedụ ọghọm dị na mmiri aki oyibo?
O nwere ike ibute oke ma ọ bụ afọ iwe na ụfọdụ ndị. Ma nke a abụghị ihe ọhụrụ. Na nnukwu ego,aki oyibonwere ike ime ka ọkwa potassium n’ime ọbara dị oke elu. Nke a nwere ike ibute nsogbu akụrụ na obi mgbawa oge niile.
Mmiri aki oyibo ọ bụ ezigbo ihe ọ sportsụ sportsụ egwuregwu?
A ọmụmụ na nso nso a bipụtara na Medicine & Science naEgwuregwu& Mmega ahụ na-egosi naaki oyiboreplenishes mmiri oke dị ka nke ọma dị ka aegwuregwu ọ drinkụ drinkụnammakarịammiri, ma ndị na-eme egwuregwu họọrọ uto nkeihe ọ drinksụ sportsụ egwuregwu.
Pedialyte ọ na-eme poop?
Ọ bụ eziePedialytena ndị ọzọ electrolyte ngwọta na-na-atụ aro mgbe ụmụaka nwere afọ ọsịsa, ọ dị mkpa ịghọta na ha adịghị n'ezieimeafọ ọsịsa pụọ. Kama ịbụ ọgwụgwọ maka afọ ọsịsa, a na-enye ha ya ka ọ bụrụnke ginwatakịrị anaghị ada mbà.Eprel 1, 2021
Ọ dị mma ị drinkụ Pedialyte?
Pedialytebụ OTC rehydrationụọ ihe ọ .ụ .ụmaka ma ụmụaka ma ndị okenye. Ọ bụ otu n'ime ọgwụgwọ kachasị dị irè ma dị nchebe maka adịghị agwụ agwụ. Maka na o nwere electrolytes, ọ dị irè karịana-a drinkingụ mmanyanaanị mmiri ma ọ bụrụ na mmiri efuola gị.Ọnwa iri 22, 2020
Etu esi eme egwuregwu ị drinksụ egwuregwu ike gị?
Mee ezigbo ihe ọ drinksụ drinksụ nke gị, nke dị oke mfe. 'Wantchọrọ ka nri gị Mee N'onwe Gị ka ị gụnye mmiri, shuga, nnu, na isi iyi nke potassium dị ka ihe ọ orangeụ orangeụ oroma,' kaufan na-atụ aro. Usoro mmiri dị mfe karị, sirop syrup (ezigbo isi iyi nke potassium), na nnu, ga-emekwa aghụghọ ahụ.
Kedu otu esi eme shuga na-enweghị egwuregwu egwuregwu electrolyte?
Ntụziaka Na-a Sportsụ Egwuregwu Sugar Na-enweghị Sugar. Gwakọta ọnụ: 1 iko (8 ounces) mmiri (abụghị carbonated) 2 tablespoons lemon ihe ọ juiceụ juiceụ. obere ngaji nnu (otu ngaji nnu nwere miliram 2,300 nke sodium, n'ihi ya ị chọrọ 1/20 nke otu ngaji nnu — ọ bụghị nke ukwuu)
Kedu ka ị si eme mmanya ị na-a isụ isotonic nke gị?
Ọ dịghị ọnụ ala dị ka nhọrọ ndị mbụ, mana ọ bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ eke ọzọ. Ntuziaka: Gbakwunye ginger ole na ole n'ime nnukwu iko esi mmiri ma hapụ ya ka ọ nọdụ ruo mgbe ekpomeekpo ga-agbanye. Wepu mpekere nke ginger ma bido na lemon, wee kpalie mmanụ a honeyụ.